I-Taliban ibambe i-12.3 yezigidi zeedola ezinkozo kunye negolide kumagosa angaphambili, ayibuyisele kwibhanki yesizwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » I-Taliban ibambe i-12.3 yezigidi zeedola ezinkozo kunye negolide kumagosa angaphambili, ayibuyisele kwibhanki yesizwe
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-Taliban ibambe i-12.3 yezigidi zeedola ezinkozo kunye negolide kumagosa angaphambili, iyibuyisela kwibhanki yesizwe
Imali kunye negolide ziye zafunyanwa yiTaliban kwizindlu zamagosa olawulo lwangaphambili e-Afghanistan nakwii-ofisi zasekuhlaleni ze-arhente yezobuntlola zikarhulumente kwaye zibuyiselwe kwingxowa-mali ye-Da Afghanistan Bank, yatsho ibhanki kwingxelo.
I-Taliban ibamba i-12.3 yezigidi zeedola ezinkozo kunye negolide ezindlwini nakwii-ofisi zangaphambili zolawulo lwase-Afghanistan kunye namagosa okhuseleko.
Izinto ezixabisekileyo ezithathiweyo zinikezelwe ngamagosa aseTaliban kwiDa Afghanistan Bank eyibhanki ephambili yelizwe.
Ngokwengxelo yebhanki, ukuhambisa ii-asethi kungqina ukuzibophelela kukaTaliban ekuhleni.
I-Da Afghanistan Bank (i-DAB), ibhanki ephambili yelizwe, ikhuphe ingxelo namhlanje ibhengeza ukuba i-Taliban inikezele malunga ne-12.3 yezigidi zeedola zaseMelika kunye negolide kumagosa asebhanki.
"Amagosa oMkhosi wamaSilamsi waseAfghanistan ngokunikezela iiasethi kunondyebo wesizwe babonakalise ukuzinikela kwabo elubala," IDan Afghanistan BankIsitsho ingxelo.
Emva kokuthatha ikomkhulu iKabul ngo-Agasti 15, i Taliban wabhengeza ukusekwa korhulumente okhoyo ngoSeptemba 7, etyumba abaphathiswa abambalwa kunye nebambela elibambeleyo kwibhanki enkulu yaseAfghan.
IDan Afghanistan Bank yibhanki enkulu yase-Afghanistan. Ilawula yonke imisebenzi yokubhankisha kunye nokuphathwa kwemali eAfghanistan. Ibhanki ngoku inamasebe angama-46 kwilizwe liphela, kwaye amahlanu kulawa abekwe eKabul, apho ikomkhulu lebhanki nalo lisekwe.
The Taliban bathathe amandla e-Afghanistan iiveki ezimbini phambi kokuba i-US isetyenziselwe ukugqiba ukurhoxa umkhosi emva kwemfazwe ebiza imali elishumi elinambini.
Abavukeli bahlasela ilizwe liphela, bathimba zonke izixeko ezikhulu ngeentsuku nje ezimbalwa, njengoko imikhosi yezokhuseleko yaseAfghan yaqeqeshwa yaza yaxhotyiswa yi-US kunye nabalingane bayo.
Owayesakuba nguMongameli wase-Afghanistan u-Ashraf Ghani wazifihla kwaye wenza iingxelo ezimbalwa esidlangalaleni ngelixa i-Taliban yatshayela ilizwe lonke. Njengoko amaTaliban afikelela kwisixeko-dolophu saseKabul, uGhani wabaleka e-Afghanistan, ekuthiwa une-169 yezigidi zeedola kwimali ephangiweyo, esithi ukhethe ukushiya ilizwe ukuphepha ukuphalazwa kwegazi.
I-Taliban ifune ukuzibonakalisa njengamandla amodareyitha ngakumbi kule minyaka idlulileyo. Oko bathathe indawo, bathembisile ukuwahlonipha amalungelo abasetyhini, baxolele abo balwa nabo kwaye bathintele i-Afghanistan ukuba isetyenziswe njengesiseko sohlaselo lobunqolobi. Kodwa abantu abaninzi baseAfghan bayazithandabuza ezo zithembiso.
“Ukungcamla kweSeychelles” kubhiyozelwa kuqala...
UBartlett Ubonge iSiseko saseLwandle saseCaribbean saseMelika...